Wikipedia:Fandraisana/kianjam-pasika - Wikipedia
Tonga soa eto amin'ity wikipedia ity ianao... tetikasa iray lehibe iarahantsika manamboatra ny rakipahalalàna (encyclopédie) malagasy amin'ny internet. Raha tianao dia azonao atao ny misoratra ho mpikambana. Mba hahazoantsika sary an-tsaina hoe ahoana ny momba ny wikipedia dia azontsika jerena ny amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy.
Raha misy fanontaniana na sosokevitra dia mandehana eto na eto.
Amin'izao fotoana izao dia misy Takelaka 94 400? voaangona ato... Mpikambana 27 171 no nanoratra anarana ato ankehitriny ... dia miandry anao hanatevin-daharana.
Afaka jerena koa ny wikipedia amin'ny finday (miteny anglisy)
Inona no maika indrindra ?
Raha misy afaka manampy dia maika indrindra ny fandikana amin'ny teny malagasy ireo teny rehetra miasa amin'ity fitaovana ity. Jereo eto ary dia mametraha sosokevitra amin'ny dinika (talk) isaky ny teny.
Tsara atao koa no manampy ny mpandika teny miteny malagasy any translatewiki. Aloha no manampy an'ny mpandika teny any Translatewiki, Tsindrio eto .
Eo koa ireo teny mila votoatiny izay efa mirohy amin'ny takelaka hafa.
Ireo takelaka 5 farany vita
TAKELAK'ITY VOLANA ITY
NY TAKELAKA TOKONY HOFORONINA
Wikipedia:Takelaka tokony hofenoina amin'ity herinandro/48
SARY N'ITY HERINANDRO ITY
Ankehitriny eto amin'ny wikipedia malagasy, ny isan'ny lahatsoratra efa noforonina dia misy 94 400. Mpikambana 27 171 no efa nisoratra anarana teto, ary 38 tamin'ireo no nanova pejy teto tamin'ny 30 andro lasa teo.
Ny Wikipedia dia raki-pahalalàna azon'ny tsirairay ovaina, ary tonga dia hitan'ny mpitsidika avy hatrany ny fanovana notehiriziny, raha manaraka ny fitsipika napetraky ny fikambanana. Misy pejy fanoroana sasantsasany afaka manoro anao hoe ahoana no manova ny pejy na manova lahatsoratra, na mampiditra sary. Anontanio ny mpandrindran'ity wiki ity raha manana fanontaniana manokana ianao.
Ho raisina ao amin'ny pejin-dresaka na ao amin'ny toerana iombonana ny adihevitra mety hisy mikasika ny lahatsoratra. Ny pejin-dresaka dia ahafahana manapa-kevitra momban'ny votoatiny tokony apetraka na tokony esorina, ary ahafahana maminavina ny hatsara ny lahatsoratra.
(Hijery ny toerana iombonana)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fandraisana/kianjam-pasika&oldid=30876"
Voaova farany tamin'ny 18 Mey 2009 amin'ny 10:23 ity pejy ity.